HUAWEI P40 Sereis မှာ ဘာထူးခြားလာမလဲ?
HUAWEI P40 Series မှာ ဘာထူးခြားလာမလဲ?
နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ အစဟာ လာဘ်လာဘ ကောင်းတယ်၊ မင်္လာရှိတယ်လို့ ယူဆကြသလိုပဲ အမြဲလိုလိုပဲ စမတ်ဖုန်းသစ်တွေ မိတ်ဆက်ကြတယ်။ HUAWEI အတွက်ဆိုရင်တော့ P Series တွေဟာ နိုဒါန်းပျိုးတယ်လို့ ပြောရသလို အားလုံးထဲမှာ Unique ဖြစ်တဲ့အချက်က Smartphone Photography ပါ။
တချို့တလေက ဆရာတစ်ဆူလို့ တင်စားကြသလို အနုပညာမြောက် လက်ရာ ဖန်တီးတဲ့နေရာမှာ HUAWEI ထုတ်ကုန် အထူးသဖြင့် Flagship အလုံးတွေကို မမီသေးဘူး၊ ဒါကလည်း နောက်ကွက်က ပံ့ပိုးနေတဲ့ နည်းပညာတွေနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။
Camera Lens အဓိက ကျတယ်ဆိုပေမယ့် ဒီ ၂ ခု ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါ အရည်သွေးကောင်းတဲ့ ရလာဒ်ကို ရရှိစေတယ်။ ဒီလို အများအမြင်မှာ ကင်မရာကိုပဲ Focus ထားတယ် ဆိုပေမယ့် သင်မသိသေးတဲ့ P Series ထူးခြားချက် တချို့ကို အရင်လေ့လာကြည့်တာပေါ့။
Nano Coating Method
Coating ဆိုတဲ့ သဘောတရားက အလွာထပ်တယ် နောက်တနည်း Layer မတူတဲ့ အလွာတွေကို တစ်ခုခြင်းထပ်တယ်လို့ ပြောနိုင်တယ်။ စမတ်ဖုန်း ကျောဘက်က Gradient Colour (အရပ်စကားမှာတော့ ရောင်ပြေး ၂ ရောင်စပ် စသဖြင့် ပြောတယ်) ရလာဖို့ အရမ်းကို အနုစိပ်ပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Breathing Crystal ၊ Pearl White နဲ့ Auora အနေထားရဖို့ Coating Process ကို သေချာ Control လုပ်ရတယ်။
P20 Series မှာ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ Morpho Aurora အရောင်က ကြည့်ရင် အရမ်းလှတယ်၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အထိ လှသလို အဲ့အရောင်ရလာဖို့ သုံးထားတဲ့ နည်းပညာကလည်း ပေါ့သေးသေး မဟုတ်ပါဘူး။
P20 Pro (Image: GizmoChina)
Colour နဲ့ ပတ်သက်လို့ လိမ္မော်ရောင် လိုချင်ရင် ဘယ်လိုစပ်ရတယ် အပြင်မှာ ပြောကျသလိုပဲ Gradient အနေထား ဖြစ်လာဖို့ ဘယ်နှစ်ရောင် သုံးရမလဲ၊ နောက်တစ်ချက် စမတ်ဖုန်းကိုယ်ထည်နဲ့ တစ်သားတည်းဖြစ်နေဖို့ နောက်တစ်နည်း သုံးသမျှ အရောင်တွေအားလုံး တစ်စတစည်း (Uniform) ဖြစ်နေစေဖို့ လိုတာပါ။
ဒီနည်းပညာကို Nanotechnology Coating လို့ ခေါ်တယ်။ P20 Series မှာတုန်းက Nanometer Coating Method အသုံးပြုခဲ့ပြီး Morpho Aurora ရလာဖို့ Layer ၈ ခု Coating လုပ်ရတယ်။
P30 Pro (Image: HUAWEI Central)
P30 မှာ Graident Essence ပိုင်ဆိုင်ဖို့9Layer ထိ Nano Materials တွေကို တစ် Layer ချင်း အသေချာထပ်ပြီး Unique Design ရလာဖို့ ခက်ခက်ခဲခဲ ဖန်တီးရတာပါ။ Breathing Crystal ၊ Peral White နဲ့ Aurora Colour Tone တွေဟာ P Series တွေရဲ့ Signature Colour တွေဖြစ်သလို P40 မှာ နောက်ထပ် တစ်ရောင်နဲ့ ထပ်မိတ်ဆက်ဦးမယ်။
အဲ့အတွက် Nano Optical Coating Method ကို အသုံးပြုလာမှာဖြစ်ပြီး Additional Layers တွေနဲ့ ပုံဖော်ပြီး ထုတ်ပြဦးမှာပါ။
Visionary Upgrades, HUAWEI?
ကင်မရာပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ထွေထူး ပြောနေစရာ မလိုဘူးထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် P Series တစ်ခုချင်းစီရဲ့ ထူးခြားချက်ကို ထောက်ပြရရင် P20 Pro ဟာ 3x Optic Zoom ၊ 10x Digital Zoom စံနှုန်းနဲ့ 2018 မှာ ထင်ရှားခဲ့တယ်။
P30 Series မှာကျ Periscope Lens ပါလာတဲ့အပြင် ISO ကို 409,600 အထိ ရတဲ့အတွက် Low Light တွက် အားရစရာ ကောင်းတယ်။ 5x Optic Zoom နဲ့ 50x Digial Zoom က လူတွေ စိတ်ဝင်အစားဆုံး အချက်တွေ ဖြစ်ခဲ့တယ်။
အဲ့တော့ P40 မှာ ဒီစံချိန်တွေ ကျော်တက်မှ ဖြစ်တော့မယ်။ အားလုံးကလည်း သိချင်နေတာ ဆိုတော့ ဘာထူးခြားလာဦးမလဲ?
ကျွမ်းကျင်သူ Ming Chi Kuo အဆိုရ 10x Optic Zoom ရလာမယ်၊ ကျောဘက်မှာ ကင်မရာ ၅ လုံးအထိ ပါလာမှာဖြစ်ပြီး အသစ်တစ်လုံးက ဘာအတွက်သုံးမလဲ? နောက်မေးစရာ တစ်ချက်က တကယ်ရော လိုအပ်ရဲ့လား?
HUAWEI သွားနေတဲ့ လမ်းကို Visionary Photography ဆိုထားတဲ့အတွက် ရှိပြီးသား Function တစ်ခုကို အားဖြည့်တယ်လို့ တွေးမိပါတယ်။ 10x လို့ ဆိုထားတဲ့အတွက် Telephoto Lens ထပ်ထည့်လိုက်တာလား?
ကောလာဟလတွေအရ 40MP ထက် Megapixel Count ပိုများလာနိုင်သလို Sensor Size က 1/1.13″ Sony ဟာ ဖြစ်မယ်။ P30 Pro ထက် ISO ပိုများမယ်လို့ ပွက်လောရိုက်နေတဲ့အတွက် ကင်မရာပိုင်း သေချာ အာရုံစိုက်ထားတယ်လို့ ပြောနိုင်တယ်။
Mate30 Pro တုန်းကလိုပဲ SuperSensing Cine ကင်မရာလို ပါလာနိုင်ချေရှိနေပြီး 5G နဲ့အတူ Kirin Processor အသစ်ကိုလည်း မြင်ရဦးမယ်။ Back Camera ကိုတော့ အားဖြည့်တာ ဟုတ်ပါရဲ့ Selife ပိုင်းမှာ ဝိတယ်လို့ ပြောလို့ရတဲ့ P Series အတွက် Sensor သစ်လာဦးမယ်။
Leaked P40 Pro Photos (Image: Gadgets NDTV)
ပြောကျတာတော့ DxOMark Selfie ရဲ့ အမှတ်ပေးဇယား ထိပ်ဆုံးမှာ ရှိနေတဲ့ Nova65G လို 32MP + 8MP Ultra-wide Lens မျိုး တွဲသုံးလာနိုင်ချေ ရှိပါတယ်။
P40 Series Display
ထုံးစံအတိုင်း OLED နဲ့ပဲ မြင်ရမယ်လို့ ပြောနိုင်တဲ့ P40 Series မှာ Punch-hole နဲ့ လာနိုင်တယ်။ Pro အလုံးမှာ 6.7″ QHD+ Resolution သုံးလာနိုင်ပြီး HDR10+ Certified ၊ DCI-P3 Colour Support နဲ့ 120Hz Refresh Rate ထောက်ပံ့မယ်လို့ သတင်းထွက်နေပါတယ်။
Leaked Photo (Image: GSMArena)
ဒါဆိုရင် ဘာပြောဖို့ လိုသေးလဲ? Visionary Photography ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း 2020 မှာ စမတ်ဖုန်း Photography ကို တစ်ခေတ်ဆန်းစေဦးမလား? ကြားဖူးနေကျ စကားလုံးတွေနဲ့ မတူတဲ့ အသွင်နဲ့ P40 Series ကို မြင်ရနိုင်မလဲဆိုတာ ဒီကနေ့ မတ်လ ၂၆ ရက်မှာ ကျင်းပသွားမယ့် Launch Event စောင့်ကြည့်ရင်း စားမြုပ်ပြန်ကြတာပေါ့။
HUAWEI Myanmar Press Release ကို ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Single Take ၊ Night Mode Hyperlapse ကင်မရာ Feature ရပြီဖြစ်တဲ့ Galaxy S10 နဲ့ Note10 Series